पोखराको लुम्ले केन्द्र विन्दु भएर ५. रेक्टर स्केल भूकम्पको धक्का – Halkhabar kura
२ चैत्र २०७६, आईतवार २१:५०
पोखराको लुम्ले केन्द्र विन्दु भएर ५. रेक्टर स्केल भूकम्पको धक्का
पर्वत । पर्वत र आसपासका जिल्लामा भूकम्पको कडा धक्का महुशुस भएको छ । आईतबार (आज) राती ८ बजेर ४६ मिनेटमा पर्वतमा भूकम्पको धम्का महशुष भएको हो । रातीको समयमा भुकम्पको धक्का महशुष हुँदा घरभित्र भएका सर्वसाधारण सडकमा निस्किएका छन् ।
राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार कास्कीको लुम्लेमा केन्द्रबिन्दु रहेर ५ दशमलव ० रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको जनाएको छ । भूकम्पको धक्का पोखरा, पर्वत, म्याग्दीमा पनि महशुष भएको छ । क्षतिको विवरण प्राप्त भएको छैन ।
पर्वत र आसपासका जिल्लामा भूकम्पको कडा धक्का महुशुस भएको छ । आईतबार (आज) राती ८ बजेर ४६ मिनेटमा पर्वतमा भूकम्पको धम्का महशुष भएको हो । रातीको समयमा भुकम्पको धक्का महशुष हुँदा घरभित्र भएका सर्वसाधारण सडकमा निस्किएका छन् ।
Previous कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर ज्यान गुमाउनेकाे संख्या ६ हजार नाघ्यो
Next कोरोना भाईरस: १५७ देशमा फैलियो, इटालीका मेयरको मृत्यु